सुनकाण्डबारे पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले मुख खोले, हेर्नुहोस् के भने ? — Sanchar Kendra
सुनकाण्डबारे पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले मुख खोले, हेर्नुहोस् के भने ?
पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याप्रकरण छानबिनका लागि बनेको गृह मन्त्रालयको समिति संयोजक इश्वराज पौडेल अनुभव हिन भएको बताएका छन् ।
उनले अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीलाई अभियोग लगाउनु त्रुटी भएको बताउँदै अनुसन्धानको दायराका विषयमा पौडेलले नजानेको र अनुभव नभएको पनि बताए ।
अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी आफैं पनि अपराधी बनेर जानुपर्ने व्यवाहारिकतालाई नबुझेका कारण इमान्दार प्रहरी अधिकारी फँसेको खरेलको टिप्पणी छ ।
एउटा कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनको धारणामा पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी र पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले पनि समर्थन गरेका थिए ।
यसैबीच तस्करीको ३३ किलो सुन र समन शाक्य हत्याकाण्डका फरार अभियुक्त छिरिङ वांगेल घलेले आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनले आइतबार बिहान जिल्ला अदालत मोरङमा आत्मसमर्पण गरेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोज केसीले जानकारी दिए।